ERÜနှင့် Erciyes Aşအကြားထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်အလုပ်ရှာဖွေရေးစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး38 KayseriERÜနှင့် Erciyes Aşတို့အကြားထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်အလုပ်ရှာဖွေရေးစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
21 / 01 / 2020 38 Kayseri, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, တူရကီ, TELPHER
eru နှင့် erciyes တို့အကြားထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
Erciyes တက္ကသိုလ် (ERÜ) နှင့် Kayseri Erciyes A.Ş. တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများနှင့်ဘွဲ့ရသူများ၏အရည်အချင်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်“ အလုပ်ရှာဖွေရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေး” protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
Kayseri Erciyes A.Ş. ERU ၏ပါမောက္ခချုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအဆောက်အ ဦး တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Mustafa Çalış, Erciyes AŞဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChairman္ဌ။ Murat Cahid Cıngıနှင့်ကထိကများတက်ရောက်ခဲ့သည်။
စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတွင်ပြောကြားသည့်ERÜပါမောက္ခချုပ်။ ဒေါက်တာ Mustafa Çalış,“ သင်သိသည့်အတိုင်း Erciyes တက္ကသိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ပြပြproblemနာအားလုံးကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါမောက္ခချုပ်ကိုစတင်သည့်အချိန်တွင်သမ္မတကြီးတက်ရောက်သည့်အခမ်းအနားတွင်အောက်ပါတို့ကိုပြောကြားခဲ့သည်။ ကျောင်းဝင်းထဲမှာငါတို့ပြောခဲ့တာကတက္ကသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနယ်ပယ်တိုင်းတွင်လျှောက်ထားရန်ကြိုးစားသည်။ ကျနော်တို့ကအဲဒါကိုအသက်ဆက်ရှင်အောင်လုပ်နေတယ်။ ဒီနေ့ငါတို့လက်မှတ်ထိုးမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ Erciyes တက္ကသိုလ်ရှိတရုတ်စာပေ၊ ကိုရီးယားစာပေ၊ ဂျပန်စာပေ၊ ရုရှားစာပေနှင့်အင်္ဂလိပ်စာပေများကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လည်းအရည်အချင်းပြည့်မှီသောကျောင်းသားများနှင့်ဆရာများပါ ၀ င်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်၊ Erciyes ရှိတောင်တက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအလွန်လေးနက်သောအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Erciyes AŞနှင့်အတူရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်ကြီးမားသောထပ်ဆောင်းတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီး Erciyes AŞအတွက်အလွန်ကောင်းသောတန်ဖိုးတစ်ခုပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများသင်ကြားနေသောကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘွဲ့ရများ၊ လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရှင်များသည်ဤပရိုတိုကော၏မူဘောင်အတွင်း Erciyes ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်လေ့လာမှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်။ Erciyes AŞသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအားအချိန်ပိုင်းကို ပြင်ဆင်၍ အချိန်ပြည့်စီးပွားရေးပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဘွဲ့ယူလိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်နိုင်ငံလုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုအထောက်အကူပြုသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလည်းအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ”
Kayseri Erciyes AŞဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ဥက္ကŞ္ဌဖြစ်သည် Murat Cahid Cıngıကယနေ့ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် Erciyes မိသားစုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအလုပ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်နေသည်။ Erciyes နှင်းလျှောစီးနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဌာနသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကြီးမားသောခရီးသွားလုပ်ငန်းအလားအလာကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်ပေါ်တွင်ကုလသမဂ္ဂကဲ့သို့သောနိုင်ငံများမှနိုင်ငံများမှနိုင်ငံခြား guests ည့်သည်များကိုလက်ခံသည်။ စင်းလုံးငှားလေယာဉ်များဖြင့်ထောင်နှင့်ချီသော iers ည့်သည်များသည် Erciyes သို့နှင်းလျှောစီးလာသည်။ သူသည် Kayseri ကိုသွားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မြို့၏နှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ သမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ရှုရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့အတွက်အလွန်လေးနက်သောစီးပွားရေးနှင့်လူမှုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အထူးသဖြင့်မကြာသေးမီနှစ်များကကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ထမ်းများသည်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများပြောဆိုသောဝန်ဆောင်မှုများကိုထုတ်လုပ်ရန်ပိုမိုလိုအပ်လာခဲ့သည်။ မင်းသိတယ် တက္ကသိုလ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်လိုချင်သောအောင်မြင်မှုကိုမရနိုင်ပါ။ အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ Erciyes Ski Centre ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံကိုအကဲဖြတ်ချင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တက္ကသိုလ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဌာနနှင့်သိပ္ပံနှင့်အက္ခရာများကိုဘာသာစကားပညာသင်ကြားပေးသောဌာနရှိသည်။ ဒီတော့တက္ကသိုလ်ကနေငါတို့လိုအပ်တာတွေကိုအလွယ်တကူဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဌာနတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ ”
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအလုပ်ရှာဖွေရေး protocol ကို
ယနေ့သမိုင်းတွင် - ၁၈၆၆ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်၊